Tag: finday avo lenta
Modely ho an'ny hafatra an-tsoratra rehetra ilainao amin'ny orinasanao
Asabotsy Jolay 15, 2017 Asabotsy Jolay 15, 2017 Anastasia Sviridenko
Toy ny bokotra mora maoderina izy io. Afa-tsy izay rehetra tsy hain'ny gadget any amin'ny birao taloha. Ny fandefasan-kafatra an-tsoratra dia toy ny fomba tsotra, mivantana ary mahomby hanatanterahana saika ny zava-drehetra amin'ny orinasa ankehitriny. Ireo mpanoratra avy ao amin'ny Forbes dia miantso ny marketing an-tsoratra ny sisintany manaraka. Ary io ilay tsy tianao halahelo satria ny maha-zava-dehibe ny finday eo amin'ny sehatry ny marketing nomerika ankehitriny no zava-dehibe indrindra. Ny fandinihana dia mampiseho fa 63% amin'ireo mpampiasa Smartphone dia mitazona ny gadget
Ny mpahay siansa any Antarctica dia misintona lalao finday. Manahy ny ray aman-dreny any Syria sao hampiasa teknolojia be loatra ny ankizy. Ny Islanders ao Samoa Amerikanina dia mifandray amin'ny 4G, ary ny sherpas any Nepal dia mifampiresaka amin'ny finday findainy mandritra ny 75 kilao. Fa misy inona? Ny toekarena finday dia tonga amin'ny teboka farany manerantany. Re matetika ny isa marobe. 800 tapitrisa mpanjifa finday vaovao miaraka amin'ny smartphone amin'ity taona ity, manerantany. 600 tapitrisa bebe kokoa amin'ny 2016. Ampio izany rehetra izany miaraka amin'ny efa misy
Moa ve ianao nisintona ny kinova farany an'ny Mobile App - iOS, Android? Izahay dia mbola eo am-pamolavolana ny atiny fa eo ny rafitra, ary tsy nitaky ezaka mihitsy ny famoahana azy io noho ny sehatra fananganana rindrambaiko mahavariana avy any Bluebridge! Tena faly izahay amin'ny zavatra mety hitranga! Efa manana ny podcast momba ny varotra izahay sy ny andian-tsarimihetsika MarketingClips izay mipetraka ao amin'ilay fampiharana ihany koa! Mamoaka hetsika koa izahay ary afaka mandefa mihitsy aza
Alahady, Aogositra 24, 2014 Sabotsy, Martsa 5, 2016 Douglas Karr
57% ny olona no tsy mamporisika ny orinasanao satria manana tranokala finday tsy voatsara ianao. Maharary izany… ary fantatsika Martech Zone anisan'ireny! Na dia manana fampiharana finday mahafinaritra aza izahay, fantatray fa ny lohahevitra finday mahazatra Jetpack dia fanaintainana hijerena ny tranonkalantsika. Rehefa manohy miara-miasa amin'ireo mpanjifanay izahay ary mijery ny fanadihadian'izy ireo dia lasa mazava amintsika fa ireo mpanjifanay izay tsy noheverina ho voatsara